December 2017 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa xalay fiidkii lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo, sida ay Puntland Mirror u sheegeen masuuliyiin dowladda ah. Maxamed Yuusuf Aadan Qaaley ayaa niman baastoolado ku hubaysan ku toogteen […]
Hargeisa-(Puntland Mirror) Somaliland has postponed the construction of UAE military base in Berbera, Geeska Afrika newspaper in Hargeisa reported on Tuesday, citing sources. Somaliland Foreign Minister Sa’ad Ali Shire has sent a letter to UAE, […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Xagjiriinta ISIS ee ku sugan gudaha Puntland ayaa taageerayaashooda ugu baaqay in ay qaadaan weeraro argagixiso inta lagu guda jiro munaasabadaha loogu dabaaldegayo sanadka cusub. Muuqaal lagu baahiyay online-ka ayaa ISIS u jeedisay […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dil toogasho ah ku fulisay shan qof, oo uu ku jiro wiil 16-sanno jir ah, kuwaasoo ay ku eedeeyeen in ay jaajuusiin u ahaayeen Kenya, Mareykanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. […]
December 24, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa dad weynaha reer Puntland ugu baaqay in ay taageeraan mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha gobolada Puntland. Faroole oo shir jaraaid ku qabtay maanta […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyootay 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiyo beeleedyo ay ku dagaalameen deegaanada miyiga ee kuyaala xadka gobolada Nugaal iyo Sool, sida uu sheegay qof […]
Garowe-(Puntland Mirror) At least 15 people were killed and more than 20 others wounded when clan militias clashed in rural area along the border of Nugal and Sool regions, resident said. The fighting between militants […]
December 23, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex madfac ayaa ku dhacay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah oo ku sugan Muqdisho. Lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas […]